Mma mma karịa Ndo: 5 Ụzọ ndabere ekwentị Photos akpaghị aka
Ị ga-ama-maara nke mkpa nke backups. Ọ bụ amanyere bụ iwu ndabere gị faịlụ, ka i ghara nwere ike hapụ ha na-adịgide adịgide. Site n'enyemaka nke ndabere faịlụ, ị na-a olileanya nke iweghachi foto gị ọbụna ma ọ bụrụ na ha na-efu, ehichapụ ma ọ bụ mebiri emebi.
A ọtụtụ ugboro o nwere ike otú ime ka ị na-esi ike gwụrụ nke aka akwado gị photos. N'ọnọdụ dị otú ahụ, i nwere ike ịbụ na mkpa nke ụzọ ndị i nwere ike ndabere gị foto na-akpaghị aka dị ka ọ ga-azọpụta gị nsogbu nke na-eme ya onwe gị. Technology eruwo a ogologo ụzọ na i nwere ike ịhụ ngwaọrụ na ike ga-eji nke fọrọ nke nta ihe niile. Ọ dị mfe ịchọta software na ụzọ ndị ọzọ site nke ị nwere ike na-akpaghị aka ndabere gị foto na a ga-azọpụta oge na mgbalị gị na akụkụ.
A bụ ndepụta nke 5 ụzọ nke ike-eji maka ngwa na mfe akpaka ndabere.
1.Google + Auto ndabere
Google+ photos aka na-akwado ihe foto nke na-jikọrọ gị Google+ akaụntụ. Ị nwere ike iji nke a mma na ma iOS na gam akporo igwe. Mgbe ị na-eji ihe iOS ngwa, ị pụrụ nanị pịa na gear na akara ngosi na-enyere akpaaka ndabere atụmatụ. All gị foto ga-akpaghị aka kwadoo gị Google+ akaụntụ.
N'otu aka ahụ n'ihi na gị android ngwa, isi ntọala na nnọọ pịa akpaaka nkwado ndabere na mpaghara na foto ga-kwadoo. Usoro nke akwado bụ nnọọ mfe ma ọ bụ aka karịsịa ndị na-eji ha Gmail akaụntụ ma ọ bụ ha Google profaịlụ a ukwuu.
Nwere ike chekwaa a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke foto.
Pictures nta karịa 2048px n'obosara, mgbe emelitere na-agụ n'okpuru free nchekwa.
Google+ mgbe jisiri nweta ewu ewu.
Ọ bụghị ihe ka mma nhọrọ.
E nwere ndokwa nke 15 GB free ohere, mgbe nke ị chọrọ ịkwụ ụgwọ maka ihe nweta nkwalite.
E nweghị obi abụọ na ọ ga-anọgide otu nke kasị mma ụzọ n'ihi na akpaaka ndabere nke foto. Ọ bụ Dropbox na na-otoro na-ewebata owuwu nke akpaaka ndabere maka nke mbụ. Dị otú ahụ kemgbe ya ewu ewu na ọbụna taa; Dropbox-anọgide n'elu oke maka a ọtụtụ ndị mmadụ.
Nanị nwee igwefoto bulite gị Dropbox na ngwa na i nwere ike inwe gị ọdịnaya akpaaka kwadoo gị Dropbox akaụntụ. Ọsọ dị nnọọ ngwa ngwa na usoro dị nnọọ mfe.
Kemgwucha ngwa ngwa akwado
Nnọọ pụrụ ịdabere
Mfe iji rụọ ọrụ
Ị nwere ike mmekọrịta ọdịnaya site na ọtụtụ ngwaọrụ
Ọ na-abịa na 2 GB nke free ohere
Anyị niile bụ maara nke ewu ewu na nke Flickr dị ka ọ bụ otu n'ime ndị kasị họọrọ saịtị n'ihi-ekere òkè gị foto. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị atụ aro foto nkekọrịta portals n'ihi na ọ dịghị mgbe compresses oyiyi. Ọ na-abịa 1 TB nke ohere nchekwa kwa akaụntụ. Ndị nwere ụfọdụ n'ime ndị kasị mma elu definition foto na-echeghị na doo anya yikarịrị-eji nke a Portal dị ka ọ na-enye ihe kasị mma mkpebi maka nnukwu ihe oyiyi.
Ọhụrụ Flickr 3.0 ngwa, ị nwere ike na-akpaghị aka bulite niile gị foto gị Flickr akaụntụ. Dị ka e nwere 1 TB ohere, ị na-adịghị mkpa ka nchegbu banyere agba si nke nchekwa ma. Ihe kasị mma bụ na foto na-setịpụrụ onwe nke pụtara na ndị mmadụ nwere ike ịnweta ya ruo mgbe ị ka ha.
Massive free ohere
Ọ na-eme na àgwà nke oyiyi emebibeghị
Great mwube nzuzo
Ọ na-adịghị ruru eru maka onye ọ bụla dị ka ọ bụghị mmadụ nile na-eji Flickr.
Anyị niile bụ maara nke otú ewu ewu ígwé ojii ọrụ dị ugbu a. Mgbe ị na-eji ígwé ojii ọrụ, ọ na-enye ohere ị na-a ndabere gị ọdịnaya na ígwé ojii nkesa. Ígwé ojii ọrụ site Amazon na-mara abụ ihe kasị mma na nke kasị pụrụ ịdabere na ọbụna dị ka Dropbox-eme ka eji Amazon ọrụ. Nke a n'onwe ya bụ ihe àmà nke ihe na-eme Amazon otú ahụ a nnukwu aha dị ka ojii nchekwa bụ nchegbu.
Ị nwere ike nanị iji ha ígwé ojii ọrụ na na ngwa,-atụgharị Nchekwa onwe mma nke ga-eje ozi gị mkpa.
Kemgwucha pụrụ ịdabere
Easy iji pụọ n'ihi na akpaaka ndabere atụmatụ
Ọ na-abịa 5 GB nke mmachi nchekwa
The Amazon ígwé ojii mbanye ngwa bụghị kensinammuo ezu maka ojiji.
A bụ ihe ọzọ ngwá ọrụ dị ike site Microsoft nke yiri ka ọ na-akpali akpali nhọrọ. Ọ na tumadi ezubere iche kwupụta Windows ọrụ ma ọ na-arụ ọrụ ezi na iOS na android dị ka mma. Mgbe ị na-edebanye maka akpaaka ndabere atụmatụ, ị ga-enweta 3 GB mmezi ohere nchekwa tinyere 7 GB na bụ ugbua ugbu a. Ọ bụ dịtụ mfe iji na nwere ike ikwe ka mfe akpaka ndabere nke foto.
Ezigbo ego nke free nchekwa
Ọ dị mfe ndabere gị photos
Dị ka ọ bụ isi a Windows ngwa, ọ bụghị ọtụtụ Android na iOS ọrụ na-hụrụ eji ya.
E nwere mma ọzọ.
Na-eche free ịhọrọ ihe ọ bụla nke a ụzọ na nkwado ndabere foto gị na-akpaghị aka enweghị ihe ọ bụla hassles
Top 50 YouTube converters ka mp3
Ihe kacha ndu akwado gị Mobile Phone
Top7 Mac undelete Ngwaọrụ n'ihi Mac OS X
> Resource> Top List> Mma mma karịa Ndo: 5 Ụzọ ndabere ekwentị Photos akpaghị aka